Nge Naing October 23, 2009 at 3:59 PM
ဒီတခါတော့ ပထမဦးဆုံး မှတ်ချက်ရေးခွင့်ရသွားပြီ။ အရင်ပို့စ်မှာ ကြွားတာ နည်းနည်း များသွားလုိ့ ပြန်လာလျှော့ချတယ်။ အစ်မလက်ရေးက ငယ်တုန်းကပဲ လှတယ် အခု ကွန်ပြူတာတွေ ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်း မလှတော့ဘူး။ ကလေးတွေမှ မဟုတ်ဘူး ခုခေတ်မှာ အစ်မအပါအ၀င် လူကြီးတွေလည်း လက်ရေးကို ဂရုမစိုက်ကြတော့ဘူး။ သက်ဝေပို့စ်ကြောင့် လက်ရေးကို အသုံးဝင်အောင် လုပ်လို့ သေးတယ်ဆိုတာကို သတိထားမိလာလို့ ကျေးဇူးပဲ။ လက်ရေးလေးနဲ့ ပို့စ်တခုလောက် တင်ဖြစ်အောင်တော့ ကြိုးစားရမယ်။
pandora October 23, 2009 at 5:06 PM
ကွန်ပျူတာမှာပဲ စာရိုက်ကတည်းက လက်ရေးလည်း ပျက်တာပါပဲ။ လက်ရေးပျက်တာက လက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ လက်နဲ့ဦးနှောက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ ဦးနှောက်ထဲက ကြိုးလေးတစ်ချောင်း ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်တော့တာလို့လည်း ပြောကြတယ်။ လက်နဲ့ချရေးတဲ့ စာလေးတွေက တန်ဖိုးထားစရာပါ။
သံလွင်အိပ်မက် အင်တာနက် မဂ္ဂဇင်းမှာတော့ စာရေးသူတချို့ရဲ့ အမှတ်တရ လက်ရေးလေးတွေ တင်ထားခဲ့တယ်။ ပန်ဒိုရာရဲ့ ဖျစ်ညှစ်ရေးထားတဲ့ စာတိုလေးလည်းပါပါတယ်။ သိချင်သွားကြည့်။
တန်ခူး October 23, 2009 at 5:41 PM
ငယ်တုန်းက ဖေနဲ့ မေက လက်ရေးလေး ၀ိုင်းနေအောင် လေ့ကျင့်ပေးတာခံခဲ့ရတယ်… လက်ရေးလှမယ်လို့မထင်ပါနဲ့ … လှလဲမလှ ဆိုးလဲမဆိုး…. ဒါပေမယ့် ကိုယ့်လက်ရေးကိုယ်မြင်ရင် ဘယ်လိုမှ ဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးလို့အားမရတာ ယနေ့ ထက်ထိပဲ… ဘယ်တတ်နိုင်မှာလဲ… ဒီလောက်ပဲ ရေးတတ်တာကိုး… နောက်မှ ကြုံရင် သက်ဝေကို တို့ လက်ရေးရွက်ကြမ်းရေချိုနဲ့တို့ လက်မှတ်ခပ်တုံးတုံးကို ပြဦးမယ်… သားကိုတော့ သူ့ အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာမကျင့်ပေးတာ အတော်တိုးတက်လာပြီ… လက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် သူ့ အဖေမျိုးရိုးပဲလိုက်ပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်…
ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး အရင်တုန်းက ကက်ဆက်ခွေ်ကာဗာမှာ
လက်ရေးလှလှလေးတွေ ရေးထားတာကို သွားသတိရမိတယ်... ဘလော့ဂ်ဂါတွေရဲ့  လက်ရေးတွေကို ပို့စ်တခုထဲမှာ တစုစည်းထဲ ကြည့်ရရင်
အပြုံးပန်း October 23, 2009 at 10:22 PM
PAUK October 23, 2009 at 10:36 PM
ကျနော်က လက်ရေးလှသူတွေကို သဘောသိပ်ကျတာ
ပီးတော့ ကျနော့်လက်ရေးကို လူကြီးလက်ရေးပုံစံ ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ..အမရာ..
ဒါပေမဲ့ ကိုးတန်းတုန်းက ဆရာမကတော့ အတန်းထဲမှာချီးကျူးဖူးတယ်။ ကျနော့်လက်ရေးက အလှကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ ရှင်းတယ်တဲ့..။
အျြမဲ စာကြောင်းအကျဲကြီးနဲ့ ရေးပလိုက်ရတာ..
myo October 23, 2009 at 11:47 PM
ဟိုဖက်မှာ ပေါက်ကိုပြောသလိုမျိုး.. :)
ခွန်မြလှိုင် October 24, 2009 at 12:31 AM
လက်ရေးက သာမာန်ထဲ ပါပေမယ့် အရင်က ရေးအားက အဘိဓာန် တအုပ်လုံးကို 80 pages ရှစ်အုပ်နဲ့ ကူးရေးခဲ့တဲ့ အထိ... ခုတော့ ဘောလ်ပင် မကိုင်နိုင်တာ ကြာပါပကော... သံလွင်အိပ်မက် အတွက် ၃ကြောင်းကို မနည်း ရေးလိုက်ရတယ် အမသက်ဝေရေ.. လက်ရေးက မပန် ပေးတဲ့ လင့်ခ်ထဲ မှာပဲ။
Moe Cho Thinn October 24, 2009 at 1:14 AM
အခုမှ အရင်ပို့စ်လေး ဖတ်မိလို့ မမ လက်ရေး လေး တွေ့လိုက်တယ်။ လက်ရေးနဲ့ လူနဲ့ လိုက်တယ်။ လူလို လှတာပါပဲလား။
ချိုသင်းလဲ လက်ရေးကို ဂရုစိုက်တတ်တယ်။ ချိုသင်း လက်ရေးကလဲ လူနဲ့ တူပါတယ်။ လုံးပြီး ၀ိုင်းဝိုင်း ကြီးကြီး ကလေးလက်ရေး၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း လက်ရေးလိုပဲ။ ခဲတံ တံတွေးဆွတ်၊ သေချာ လှအောင် ရေးသလိုပေါ့။
ကိုယ်ချစ်မိသူကျတော့ အရင်ချစ်ပြီးမှ လက်ရေး ကြည့်မိတာ။ ပဲပင်ပေါက် အမွှေးပေါက် သလိုပဲ။ သူ့လက်ရေးမြင်ပြီး shock ဖြစ်သွားတယ်။ လက်ရေးသာ အရင်တွေ့မိရင် လှည့်တောင် ကြည့်မိမှာ မဟုတ်။ သူ မသိတဲ့နေရာမှာ လာကြုံးဝါးလိုက်တာလေ။
T T Sweet October 24, 2009 at 7:01 AM
မသက်ဝေ ... များလဲ ကွမ်ပျူတာနဲ့ ရေးပါများလို့ လက်ရေးတွေ မလှတော့ဘူးတော့ ... (အရင်က လှတာကျနေတာပဲ ... )
သမီးလေးကိုတော့ လက်ရေးလှအောင် လေ့ကျင့်ပေးနေပါကြောင်း။
ပုံရိပ် October 24, 2009 at 10:04 AM
ဟုတ်တယ်နော် ကွန်ပျူတာပဲ အားကိုးပြီးရိုက်နေကြတော့ လက်ရေးလှလှ မရေးဖြစ်တော့ဘူး။ အရင်က ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ စာလေးတွေရေးရင် ခဲတံ တစ်ချောင်းနဲ့ စာရွက်တစ်ရွက်နဲ့ ရေးရတဲ့ အရသာကို လွမ်းမိသား။ အခုတော့လည်း ကွန်ပျူတာပေါ်မှာပဲ ရိုက်ဖြစ်နေတယ်။
and so what did you mean these notes for???
"အိုင်ဒီယာ အသစ်ပေါ့… ဟဲဟဲ…။
မှတ်ချက် ။ ။ ပို့စရာရှိတဲ့သူများထံ ဤနည်းဖြင့် ပို့ကြည့်လိုက်ပါ… မုချ အောင်မြင်မှု ရပါလိမ့်မည်။ ဒီထက် သစ်တဲ့ အိုင်ဒီယာ နောက်တခုလဲ ရှိနေပါသေးသည်။"
What is one more new idea???
Please clarify them as well.
Hmoo October 25, 2009 at 2:47 AM
Give me some advice...I don't know how2type in Burmese..My handwriting is bad..
2 get other Burmese ppl handwriting is we met3or4timeayear :)
JulyDream October 25, 2009 at 6:45 PM
လက်ရေးလှတဲ့သူများကို အားကျမိပါတယ်။ ကိုယ်တွေကတော့ ဆရာဝန်လက်ရေးလို့ အပြောမခံရပေမယ့် ... ဒန်တန့်တန်ပေါ့ဗျာ။
မြသွေးနီ August 25, 2011 at 11:02 AM
ရုံးရောက်ရောက်ချင်း အစ်မ Commentတွေ့တာ နဲ့ မြသွေးအပြေးရောက်လာခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီကနေ ညီမပန်ဒိုရာ ကွန်မန့်မှာ ညွှန်ထားတဲ့ ဆိုက်ရော၊ အပြုံးပန်းဆီကိုပါ ရောက်သွားပြန်တယ်။ မြသွေးလည်း လက်ရေး၊ လက်မှတ်တွေ အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ mie nge ပြောသလို Blogger တွေရဲ့ မူရင်းလက်ရေး၊ လက်မှတ်နဲ့ စာစုလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Bloggerတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့ ခံစားချက်... စသဖြင့် ခေါင်းစဉ်လေး တစ်ခုအောက်မှာ စုနိုင်သလောက်စုပြီး အစ်မဆိုက်မှာ တင်ပေးပါလားဟင်..။ :)